Pejy ho an'ny Tanora - Lalamasaka Hatry ny Ela
par Lalamasaka Hatry ny Ela · Published 20 juin 2020 · Last modified 2 février 2021
Andriamanitra tsy azo vazivaziana.Ny vokatry ny fahotan’ny fahatanorana. Ny maha zava-dehibe ny manambady olom-boavonjy. Ny sazin’ny fanambadiana mpanota. Ireo fitandremana tokony hatao sy tokony ho fantatra mialohan’ny hidirana amin’ny fifamatorana amin’ny mariazy.Toriteny sy fampianarana ho an’ny tanora. Azon’ny mpitaiza tanora sy ny Ray aman-dReny manana tanora hakàna lesona hanoroana lalana azy ireo. +2
par Administrator · Published 30 mars 2020 · Last modified 30 avril 2021
Rehefa tonga rembin’ny fahotana ianao dia tsy maintsy ho tonga amin’ny fanamelohan-tena. Misy karazany roa ny fanamelohan-tena mahazo anao : Ny iray voalohany dia mamporisika anao hiantoraka eo an-tongotry ny Tompo. Ny Faharoa kosa dia miezaka mandresy lahatra anao fa tsy afaka ny hamela heloka anao intsony Andriamanitra raha vao tafavily niala tamin’ny lalana marina ianao. Fantaro fa io fanamelohan-tena...
par Administrator · Published 22 octobre 2019 · Last modified 3 décembre 2019
Ary amin’izany ny fanjakan’ny lanitra dia ho tahaka ny virijina folo, izay nitondra ny fanalany* ka nivoaka hitsena ny mpampakatra.[*Na: fanilony] Ary ny dimy tamin’ireo dia adala, fa ny dimy kosa hendry. Fa ny adala nandray ny fanalany*, nefa tsy nitondra solika fitaiza ; ary ny hendry kosa nitondra solika tao anatin’ny fitondrany sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny...
par MA Daoud · Published 28 septembre 2019 · Last modified 3 décembre 2019
Fitiavana refesina amin’ny Fankatoavana
FITIAVANA REFESINA AMIN’ NY FANKATOAVANA Ny fitiavantsika tsy mba refesina amin’ ny fihetseham-po… toy ny hoe : impiry isika no mitomany, na ny fanambarana hoe toa inona no haben’ ny fitiavantsika an’ Andriamanitra… fa ny fitia­vantsika dia asehon’ ny fankatoavantsika ! « Raha tia Ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ». Miasa mafy ho an’ ireo tiantsika isika, ary ny fitiavana manamaivana ny asa....
Mivelona miaraka amin’i Jesosy
Nomena antsika ny fiainana mba hanatanterahana ny zava­kendren’ Ilay Mpahary antsika eo amin’ ny fiainantsika, dia ny hiaina toa izay niainan’ i Jesosy. Izay tsy miaina toa izay niainan’ i Jesosy dia tsy miaina araka izay tokony ho izy (I Jao. 2 : 6). Izay tsy miara-miaina amin’ i Jesosy eto an-tany dia tsy afaka hiara-­miaina Aminy any an-danitra. « Ary...
Nataon’i Heroda tao an-tranomaizina Jaona Mpanao batisa noho ny famelivelezana ny fijangajangana ka nanaovany hoe : « Tsy ara-dalàna aminao ny manambady ny vadin’i Filipo rahalahinao » .Tezitra mafy Herodiasy satria tiany ny hitoetra amin’ny maha-vadin’ny mpanjaka azy, koa dia namelatra fandrika tamin’i Heroda izy mba hampanantenany azy ny lohan’i Jaona Mpanao batisa. Nampalahelo an’i Heroda izany zavatra izany, kanefa noho ny sain’i Heroda...
Faizin’ Andriamanitra ny ray aman-dreny matetika noho ny tsy fandrarany ny zanany tsy hijangajanga sy tsy hanaozava-betaveta ! Mpaminany sady mpisoronabe Ely, kanefa satria nahalala izy fa nandry tamin’ ireo vehivavy tonga tao amin’ ny tempoly mba hivavaka ny zanany lahy, izay efa tonga taona, ary na dia mba niteny an-janany ihany aza Ely,kanefa tsy nisakana azy tamin’ ny tsorakazo (I Sam. 2:22; I...